Ny lalao video ara-batana koa dia hanana mialoha varotra toy ny nomerika | Vaovao momba ny gadget
Araka ny fantatrao tsara, miaina amin'ny vanim-potoana izay itomboan'ny lalao video nomerika isika, indrindra amin'ireo lohateny izay tsy fividianantsika matetika ao anaty boaty. Izany rehetra izany dia vokatry ny zava-misy fa na eo aza ny daty manakaiky ny fandefasana ny vidiny dia mitovy ihany, na izany aza, ny lalao video nomerika dia manana tombony toy ny fahafahany misintona azy mialoha sy milalao 00:01 amin'ny andro fandefasana, ny tsy fahafahany mamoy na mamaky azy, ary koa ireo fihenam-bidy mahaliana izay safidintsika aorian'ny volana vitsivitsy. Na izany aza, Ireo fivarotana lalao video dia te-hanova ny tsenan-batana amin'ny alàlan'ny fanolorana kopia ara-batana alohan'ny varotra azonay angonina andro vitsivitsy talohan'izay andro fandefasana.
Ny tanjona voalohany dia ny hahafahana misoroka ny andalana lava sy ny halafon'ny fandefasana lalao video amin'ny mpampiasa amin'ny andro fanombohana ihany. Ary izany ve raha avelan'izy ireo hody ny lalao ara-batana andro maromaro alohan'ny fanombohana ofisialy ny mpampiasa, dia afaka mamonjy ny ankamaroan'ny korontana sy ny vidiny aterak'izany izy ireo. Amin'izao fomba izao, ny lalao dia hampiditra ampahany toy ny lalao video nomerika izay tsy hamela ny lalao hanomboka raha tsy amin'ny daty manokana, izay hapetraka amin'ny alin'io ihany amin'ny andro fandefasana. Ny marina dia hevitra iray izay tsy azontsika ny nahatonga izany tamin'izy ireo teo aloha, saingy mazava ho azy, raha tsy mahita ny sofin'ny amboadia mivarotra nomerika izy ireo vao manapa-kevitra ny hanatsara ny fomba mankafy ny atiny ny mpampiasa.
Raha fintinina, ity fandraisana andraikitra ity dia avy amin'ny Fikambanan'ny mpivarotra elektronika any Etazonia, ary mbola tsy misy afa-tsy ny tolo-kevitra fa raha lasa tena izy dia afaka manova ny tsena amin'ny fomba mahery vaika, satria maro ny mpampiasa no mahazo ny kopia niomerika hahafahany milalao ny alina talohan'io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny lalao video ara-batana koa dia hanana varotra mialoha toy ny nomerika
Inona no hojerena anio amin'ny Netflix holanina amin'ity alahady tolakandro ity?